Marketingtù Azụmaahịa America (AMA) na-akọwa akara dị ka a aha, okwu, imewe, akara, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-egosipụta ezigbo ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị dị iche na nke ndị na-ere ya ọzọ.
O siri ike ịchọta ajụjụ ndị dị mfe karị: Whonye ka ị bụ? Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ gị ji adị? Kedu ihe mere ị jiri dị iche na asọmpi ahụ? Ma, ndị ahụ bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ kachasị sie ike azụmahịa nwere ike ịza. O nwere ezi ihe kpatara ya. Ha na-emetụta obi azụmaahịa, ụkpụrụ ya na isi ebumnuche ya. Na ịdị adị ya n'ahịa asọmpi.
Ndi akwukwo na Godfrey tinye ihe omuma vidiyo a di nma na ihe ika bu:
Nwere ike ibudata otu akwụkwọ PDF zuru ezu ebe a.
Tags: brandika kọwaaakara njirimarachukwuemekainfographic vidiyoKedu ihe bụ ika
Otu esi zere igbu onwe gị na saịtị